Ubuntu, yazi yonke into ngale nkqubo yasimahla esekwe kwiLinux | Ubunlog (Iphepha 9)
I-termtosvg, isixhobo sokurekhoda iseshoni yakho yesiphelo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-termtosvg. Esi sixhobo siza kusivumela ukuba sibhale phantsi iseshoni yesiphelo kwifomathi ye-svg.
Indlela yokuqhubela phambili ngokwezifiso zakho Ubuntu
Inqaku elincinci lendlela yokwenza ngokwezifiso uguqulelo olutsha lwe-Ubuntu kunye neGnome desktop. Isikhokelo ngamanyathelo okuthatha ukuba ube ne-Ubuntu ...
Indlela yokukhawulezisa ukuqalisa Ubuntu
Isifundo esincinci sendlela yokukhawulezisa ukuqala kobuntu bethu okanye nakuphi na ukusasazwa okusekwe ku-Ubuntu njengeLinux Mint 19 ...
Abahleli bokubhaliweyo kunye nokusetyenziswa kwe-IDE kwifomathi yeAppImage yokusetyenziswa ku-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga abanye abahleli beetekisi kunye nee-IDES esinokonwabela kwifomathi yeAppImage.
Ubuntu Yenza izixhobo zoPhuculo 18.05, fakela izixhobo zokuphucula
Kwinqaku elilandelayo siza kubona indlela yokufaka Ubuntu Yenza izixhobo zoPhuculo 18.05 ukuze ukwazi ukufaka izixhobo zokuphucula Ubuntu
I-SDKMAN, isixhobo se-CLI sokulawula izixhobo zokuphucula isoftware
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-SDKMAN. Le yinkqubo ye-CLI onokuthi ulawule ngayo ii-SDKs zakho
Mu, faka lo mhleli wePython wabaqalayo usebenzisa umbhobho
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kuMu Lo ngumhleli wekhowudi yePython eya kwenza izinto zibe lula kubaqalayo.
Abahleli bevidiyo kwifomathi yeAppImage esinokuthi siyisebenzise ku-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga abanye abahleli bevidiyo yeAppImage yasimahla esinokuthi siyisebenzise kuBuntu bethu.
Nyusa imifanekiso ye-ISO ku-Ubuntu ukusuka kwisiphelo sendlela okanye umzobo
Kwinqaku elilandelayo siza kubona ukuba singayifaka njani imifanekiso ye-ISO kwisiphelo sendlela okanye imizobo kwinkqubo yethu yokusebenza Ubuntu.
Abahleli beBhash kwi-intanethi, hlela i-bash script yakho kwisikhangeli
Kwinqaku elilandelayo siza kuqwalasela abahleli be-bash abambalwa kwi-intanethi ukuze sivavanye izikripthi zethu ze-bash kwisikhangeli
Imimoya, lawula i-RSS yakho kunye ne-podcast kwi-Ubuntu desktop
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iWinds. Le yinkqubo esinokuthi ngayo ukulawula iRSS kunye neePodcasts zethu.
Ukubuya kweTente, ukulandelelana okungafanelekanga kuMhla weTente
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi- Return of the Tentacle Prologue. Lo ngumdlalo ongekho mthethweni kumdlalo wasentsomini woMhla weTente
Distroshare: iskripthi esinceda ukuba wenze owakho umfanekiso woBuntu
Distroshare Ubuntu Imager, siskripthi esisekwe kwimiyalelo onokuyifumana kwiphepha elisemthethweni le-Ubuntu apho inkqubo icacisiwe khona ...
Iimpawu ze-Gnu / Linux ezikwi-intanethi ukwenza imiyalelo kwi-browser
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kuluhlu lweetheminali ezikwi-Intanethi apho nabani na anokuziqhelanisa nemiyalelo yeGnu / Linux
Lua, faka olu lwimi lunamandla lokubhala ku-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga ukuba singalufaka njani ulwimi lweLua script ku-Ubuntu kwindawo yokugcina izinto okanye ngokuyidibanisa.
Uyifaka njani i-Android ku-Ubuntu ngaphandle kwengcambu?
Ukuba kunokwenzeka ukuba ube nakho ukwenza ukhuphelo lokhuseleko ngaphandle kokuba yingcambu kwaye ngaphandle kokubhenela kwizicelo ezongezelelweyo.
INtaba yeGoogle Drayivu ekuhlaleni kwi-Ubuntu njengenkqubo yefayile ebonakalayo
Kwinqaku elilandelayo siza kubona iindlela ezimbini zokubeka i-google drive ekuhlaleni njengenkqubo yefayile ebonakalayo kwi-Ubuntu.
IJubler: iqonga lomnqamlezo kunye nomhleli ovulekileyo wemithombo engezantsi
IJubler sisoftware evulekileyo ekhutshwe phantsi kwelayisensi ye-GNU kwaye ibhalwe ngolwimi lwenkqubo yeJava. Ke, inako ...
I-LeoCAD, yenza iimodeli ezibonakalayo kunye neziqwenga ze-LEGO ezivela ku-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiLeoCAD. Ngalenkqubo yeplatlatform siza kuba nakho ukwenza iimodeli ezibonakalayo ezinamaqhekeza e LEGO.
Idabi le-Wesnoth 1.14, ufakelo kwi-Ubuntu 18.04 ukusuka kwi-PPA
Kwinqaku elilandelayo siza kubona ukuba uyifaka njani iMfazwe yeWesnoth 1.14 kwi-PPA engekho mthethweni kuyo nayiphi na inguqulelo ye-Ubuntu
ICinnamon 4, inguqulelo entsha eya kuthi ikhawuleze kunabo bonke
ICinnamon 4 yinguqulelo elandelayo enkulu eya kuthi abasebenzisi beLinux Mint kunye nabasebenzisi be-Ubuntu babe nayo kwikhompyuter yabo kunye nophuculo oluthile kwi ...
I-Gitter Desktop, fakela esi sicelo sonxibelelwano kwii-Ubuntu desktop
Kwinqaku elilandelayo siza kubona ukuba singayifaka njani iGitter Desktop kwi-Ubuntu. Ngayo sinokuseka unxibelelwano phakathi kwamaqela asebenzayo.
UmculoBrainz Picard 2.0, ithegi iifayile zomculo wakho ku-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kuMusicBrainz Picard 2.0. Ngale nkqubo sinokumakisha iifayile zethu zomculo ngokulula
Ukuxhobisa kunye neGelatinous: umdlalo wedabi kwindawo ene… iiJellies?
Ibali liqala kwikamva apho abantu balungiselela ngoxolo, ke kweli nqanaba lotshintsho kufuneka bathumele ...
Ushicilelo lweMinecraft Java, ufakelo ku-Ubuntu 18.04 kwiwebhu, i-snap okanye iPPA
Kwinqaku elilandelayo siza kubona ukuba singayifaka njani i-Minecraft Java Edition ku-Ubuntu 18.04 kunye nepakeji ekhutshelweyo kwiWebhu, iPPA okanye ipakethe ye-snap.
Ezona ofisi zisimahla zeBuntu
Isikhokelo kwii-suites ezisimahla zeofisi ezikhoyo zeBuntu. Iinkqubo ezisebenza ngaphandle kweintanethi okanye ezingadingi kufakwa.
Ibhanki yasekhaya, inkqubo yobalo
I-HomeBank yinkqubo yokubalwa kwemali ekhaya okanye yabasebenzisi abancinci abaya kusinceda sigcine iiakhawunti zethu zihlaziyiwe ngaphandle kokuchitha imali ...
Iapps ezi-5 zabantu abavelisa kakhulu ku-Ubuntu
Inqaku elincinci malunga neenkqubo ezininzi eziluncedo zokuvelisa abantu abanekhompyuter Ubuntu. Iiapps eziye zabaluleka ...
Wiki.js, umthombo ovulekileyo we-wiki esekwe kwiNode.js, Git, kunye neMarkdown
Kwinqaku elilandelayo siza kubona indlela yokufaka iWiki.js kwiseva ye-Ubuntu 18.04 LTS. Le yi-wiki esebenza enkosi kwii-nodejs, i-git kunye ne-markdow
ILubuntu 18.10 iya kuba ngama-32 kancinci ukuba unqwenelwa luluntu lwakho
I-Lubuntu 18.10 iyaqhubeka nokukhula kwayo kwaye iya kuyigcina i-32-bit version, ubuncinci ukuba uluntu lwayo luyayifuna kwaye lufumana inkxaso eyoneleyo ...
Ipeyinti 1.6, faka le nkqubo yokuzoba kwi-Ubuntu 18.04
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iPinta 1.6. Le yinkqubo elula kwaye elula yokuzoba Ubuntu. Ngenye indlela yokupeyinta.
Ungazenza njani izicelo ze-Ubuntu kwiphepha lethu lewebhu ngendlela elula
Isifundo esincinci sendlela yokwenza izicelo ze-Ubuntu ezivela kumaphepha ewebhu kunye neenkonzo zewebhu esihlala sizisebenzisa mihla le ...
I-Bootiso, yenza i-USB eqhutywayo kwi-terminal
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iBootiso. Esi sixhobo siza kusivumela ukuba senze i-USB eqalekayo ngayo nayiphi na imifanekiso ye-ISO.
I-DeadBeef 0.7.2, fakela isidlali somculo ku-Ubuntu 18.04
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-DeadBeef 0.7.2. Esi sisidlali somculo esikhawulezayo nesikhanyayo seBuntu.
Ezona MMORPG zibalaseleyo ze-Ubuntu 18.04
Isikhokelo esincinci kwimidlalo yevidiyo eyi-MMORPGs esinokuyifumana kwaye siyonwabele Ubuntu 18.04 ngaphandle kokusebenzisa iSteam ...
Scout_Realtime, jonga i-Gnu / Linux server yakho kwisikhangeli
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-scout_realtime. Le nkqubo iyakusinceda ukuba sibeke esweni iseva yethu kwisikhangeli
Izixhobo zenkqubo ezi-6 ekufuneka sizazi ngokukaMartin Wimpress
Siphinda inqaku elipapashwe nguMartin Wimpress malunga nezixhobo zenkqubo esinazo ngoku kwifomathi ye-snap ...
Browsh, ibrawuza yewebhu eya kukothusa
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiBrowsh. Esi sikhangeli sewebhu sothuselo lwesiphelo kunye neempawu zalo.
Google Play Store, yifake kwi-Anbox kwaye uvumele inkxaso ye-ARM
Kwinqaku elilandelayo siza kubona indlela yokuba neGoogle Play Store kunye nenkxaso ye-ARM kwi-Anbox kwaye ke sikwazi ukufaka i-APP ngokulula
Izinto ezi-6 ekufuneka uzenzile emva kokufaka iLinux Mint 19 Tara
Isifundo esincinci kwinto oyenzayo emva kokufaka iLinux Mint 19 Tara, inguqulelo entsha yeLinux Mint esekwe kwi-Ubuntu 18.04 LTS, inguqulelo yamva nje.
Wttr.in, jonga uqikelelo lwemozulu oluvela kwisiphelo sendlela
Kule nqaku siza kujonga iWttr.in. Le nkqubo yesiphelo iya kusinceda ukujonga ixesha layo nayiphi na indawo.
IWallabag, enye indlela yasimahla kwiPokotho yoBuntu
IWallabag yinkonzo ekufuneka ifundwe emva kokuba ikhuphisana nePocket kodwa ngokungafaniyo nokusetyenziswa kweFirefox, iWallabag ngumthombo ovulekileyo kwaye simahla ...
Umarker, umhleli weMarkdown ofumaneka ngakumbi ku-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga uMakishi. Lo ngomnye umhleli weMarkdown esinokuyifaka ngokulula kwaye siyisebenzise ku-Ubuntu.
I-Canonical ikhupha ingxelo encinci ye-Ubuntu yelifu
Ubuntu obuncinci okanye obaziwa ngokuba yi-Ubuntu Minimal busiwe kweyona seva idumileyo yamafu, ilungele abo bafuna isantya ...
Ungazilungisa njani iingxaki zesandi ku-Ubuntu 18.04
Isifundo esincinci sendlela yokusombulula ezinye iingxaki zesandi esinokuba nazo Ubuntu 18.04 ngoqwalaselo lwayo ...
I-ApacheBench (ab), yenza iimvavanyo zomthwalo kwiphepha lakho lewebhu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-ApacheBench. Esi sicelo sesiphelo siya kusivumela ukuba senze uvavanyo lomthwalo kwiwebhusayithi yethu.
Uzuko, jonga ikhompyuter yakho ye-Ubuntu 18.04 LTS kwisiphelo sendlela
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga ukuKhanya. Le nkqubo iyakusivumela ukuba sibeke iliso kwi-Ubuntu 18.04 LTS yethu kwisiphelo sendlela.
I-GIMP 2.10.x Umhleli Wezithombe, hlaziya okanye ufake kwiPPA okanye kwiFlatpak
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga indlela yokufaka okanye yokuhlaziya i-Gimp 2.10.X yomhleli wemifanekiso usebenzisa iPPA okanye iPlppak
Ungayitshintsha njani iNautilus ngeNemo kwi-Ubuntu 18.04
Isifundo esincinci sendlela yokutshintsha umphathi wefayile yeNautilus kunye nomphathi wefayile yeNemo ku-Ubuntu 18.04 ...
I-Eclipse Photon 4.8, iyafumaneka ukuyifaka nge-Snap kwi-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga ukuba singayifaka njani i-Eclipse Photon 4.8 ku-Ubuntu sisebenzisa iphakheji ye-snap ehambelanayo.
Uyifaka njani i-Apache Cordova kwi-Ubuntu 18.04
Isifundo esincinci sendlela yokufaka i-Apache Cordova kwi-Ubuntu 18.04. Isixhobo esipheleleyo kwabo bafuna ukwenza ii -apps ...
Isiseko seJuno sokuqala seBeta ngoku siyafumaneka
Inguqulelo yokuqala ye-beta ye-Elementary Juno, inguqulelo enkulu elandelayo ye-Elementary OS, ngoku iyafumaneka. Inguqulelo eya kubandakanya usetyenziso oluhlawulelweyo lwabasebenzisi
I-RedNotebook, incwadana yemithombo evulekileyo yoBuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiRedNotebook. Le yidayari evulekileyo esinokuyisebenzisa kamnandi ku-Ubuntu.
Ubuntu Studio isaphila kwaye ipapasha isikhokelo simahla sokuhlela iaudio ngeSoftware yasimahla
I-flavour esemthethweni ye-Ubuntu, Ubuntu Studio ipapashe isikhokelo simahla sokuhlela iaudio nge-Ubuntu Studio okanye Ubuntu Izixhobo zeSoftware
Umhleli wevidiyo ye-OpenShot 2.4.2, uzinzo ngakumbi kunye neziphumo ezi-7 ezintsha
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-OpenShot 2.4.2 Umhleli weVidiyo. Le nguqulo intsha inikezela ngeziphumo ezitsha ezisi-7 kunye nozinzo olukhulu.
IDaVinci Resolve 15, ivelisa ipakethe yedeb yalo mhleli wevidiyo
Kwinqaku elilandelayo siza kubona ukuba singayenza njani ifayile .deb ukuze sikwazi ukufaka iDaVinci Resolve 15 umhleli wevidiyo ku-Ubuntu.
Ungazisusa njani iinkozo ezindala ku-Ubuntu?
Xa ufaka i-kernel entsha, ezindala azisuswanga kuba zinokukunceda ukuba uqalise ukwenza impazamo entsha okanye ngesizathu esithile.
I-MTR, isixhobo sohlalutyo lwenethiwekhi ukusuka kwisiphelo sendlela
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-MTR. Esi sisixhobo sokuhlalutya inethiwekhi ukusuka kwisiphelo sendlela yethu.
I-MindForger, faka le IDE yokuMakisha kwi-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kubona indlela yokufaka i-IDE yeMarkdown ebizwa ngokuba yiMindForger. Ingumthombo ovulekileyo wenkqubo yeFreeware efumanekayo kuBuntu.
Ngoku iyafumaneka ngeLinux Mint 19 Tara
Inguqulelo esekwe ku-Ubuntu 18.04, iLinux Mint 19, ikhutshiwe ngoku. Inguqulelo entsha ibandakanya iindaba kunye notshintsho kodwa utshintsho olulindelekileyo ...
Yonwabela iWorld Warcraft ku-Ubuntu ngoncedo lweWinepak
Ukufakela umdlalo weWarcraft kwi-Ubuntu 18.04 okanye enye into ethathwe kuwo, siza kuxhasa ukufakelwa kwesi sihloko kwinkqubo yethu.
I-Nginx, ufakelo olusisiseko lweseva kwi-Ubuntu 18.04
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Nginx. Siza kubona indlela yokufaka kunye nokulawula iinkonzo zale seva kwi-Ubuntu 18.04 yethu.
Imeyile, thumela ii-imeyile ukusuka kwisiphelo sendlela yekhompyuter yakho yeGnu / Linux
Kwinqaku elilandelayo siza kubona ukuba ungayithumela njani i-imeyile ukusuka kwisiphelo sendlela yethu sisebenzisa umyalezo weposi.
Isifundo esincinci kwezona zabathengi zibalaseleyo zeGit zabasebenzisi abangafuni ukusebenzisa i-terminal ukulawula iGit kunye neenkqubo zayo ...
Kolu hlaziyo lutsha lweTurok sinokulufumana kuyo, ezibukhali nezichanekileyo zemizobo ye-HD, i-OpenGL backend kunye nolunye uyilo lwenqanaba
Izizathu ezi-7 zokuba ndicebisa ukusebenzisa iXubuntu
Inqaku elincinci apho ndicacisa khona izizathu ezisi-7 zokuba kutheni ndikhetha ukusebenzisa iXubuntu kunye neXfce ngaphezulu kweGnome okanye nayiphi na incasa esemthethweni Ubuntu ...
I-AWS CLI (i-Command Line Interface), ufakelo kwi-Ubuntu 18.04 LTS
Kwinqaku elilandelayo siza kubona indlela yokufaka i-AWS CLI kwi-Ubuntu 18.04. Singayifaka nge-APT okanye ngePython, kuxhomekeke kwinto elula ngakumbi kuthi.
I-Peppermint 9 ngoku iyafumaneka nge-Ubuntu 18.04 njengesiseko
I-Peppermint 9 yinguqulelo entsha yolunye losasazo olulula olusekwe ku-Ubuntu. Inguqulelo entsha isebenzisa Ubuntu 18.04 njengesiseko se ...
I-WebArchives, dibana neWikipedia ngaphandle konxibelelwano lwe-Intanethi
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-WebArchives. Le nkqubo isivumela ukuba siqwalasele amaxwebhu e-Wikipedia kunye nabanye ngaphandle kweintanethi.
IChromium BSU - umdlalo wesiphekepheke we-arcade
ngumdlalo wevidiyo yohlobo lwe-arcade, isitayile sokudubula esime nkqo kunye neziphekepheke. Lo ngumdlalo wevidiyo osekwe kwisoftware yasimahla kunye nekhowudi ...
Rust, faka olu lwimi lwenkqubo kwi-Ubuntu 18.04
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga ukuba singalufaka njani ulwimi lwenkqubo yokuRust ku-Ubuntu 18.04 ngokulula.
Uyifaka njani i-CodeBlocks kwi-Ubuntu 18.04?
Le yindawo evulekileyo yokuphuhlisa imithombo yelayisensi phantsi kwelayisensi kawonkewonke yeGNU eneenkxaso ezininzi zokuhlanganisa.
Ubuntu Bamba i-OTA-4 RC ngoku iyafumaneka
Iqela le-UBPorts likhuphe i-RC inguqulelo ye-Ubuntu Touch OTA-4, inguqulelo ehlaziya inkqubo yokusebenza kweselfowuni yethu ku-Ubuntu 16.04 ...
Uyifaka njani iGitlab kwiseva yethu ene-Ubuntu
Isikhokelo esincinci sendlela yokufaka i-Gitlab kwiseva yethu ene-Ubuntu kwaye ungaxhomekeki kuyo okanye usebenzise isoftware yeGithub evela kwiMicrosoft.
Umyili weVR180, uGoogle ufuna ukuba kube lula ukuhlela ividiyo yeVR kwiGnu / Linux
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga inkqubo ye-VR180 yoMdali. Esi sicelo senziwe nguGoogle, sifuna ukwenza ukuhlelwa kweVR ngokulula
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga umphathi we-Y PPA. Ngalesi sicelo somzobo sinokulawula kwaye songeze iPPA kwi-Ubuntu yethu.
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga indlela esinokuthi senze ngayo ufakelo olusisiseko lwe-Ubuntu Server 18.04 LTS kumatshini weVirtualBox.
Isikhokelo esincinci sendlela yokwenza i-pdf enemifanekiso enezixhobo ezahlukeneyo kunye namanqanaba ahlukeneyo, zonke zinobuntu njengemvelaphi.
I-Winepak, indawo yokugcina iPlppak kwimidlalo yeWindows kunye nokusetyenziswa
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiWinepak. Le yindawo yokugcina iplppak apho sinokukhuphela kunye nokufaka usetyenziso lweWindows.
I-LightZone, ukungaqhubekeki komfanekiso okwenziwe kwi-Ubuntu nakwiziphumo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiLightZone. Le nkqubo iyakusivumela ukuba sisebenzise umfanekiso ongonakalisiyo ku-Ubuntu.
Uyifaka njani inguqulelo yamva nje ye-KDE desktop, iPlasma 5.13 kwi-Ubuntu bethu
Inguqulelo entsha yePlasma ngoku iyafumaneka. IPlasma 5.13 iza nezinto ezingcono ezinkulu ezilungiselelwe uyilo kunye nokusetyenziswa kwezixhobo kwaye sele sinako ...
I-Notepad ++, faka esi sicelo ku-Ubuntu ngokusebenzisa iphakheji yayo ye-Snap
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-Notepad ++. Le nkqubo inokufakwa ku-Ubuntu ngokusebenzisa iphakheji yayo ye-snap.
Ungazikhuphela njani iividiyo zeVimeo ku-Ubuntu
Isifundo esincinci kwizixhobo eziza kusinceda sikhuphele iividiyo zeVimeo ku-Ubuntu ngaphandle kokusebenzisa izicelo zobunini ...
Dukto R6, ugqithise iifayile phakathi kweekhompyuter ngokulula
Kwifayile elandelayo siza kujonga iDukto R6. Le nkqubo iya kuba luncedo kakhulu ukuba sifuna ukuhambisa iifayile phakathi kweekhompyuter.
Eyona midlalo yephazili ye-Ubuntu
Isikhokelo ngeyona midlalo iphambili ye-puzzle ekhoyo Ubuntu kwaye sinako ukufaka nokudlala ngaphandle kokusebenzisa nasiphi na isixhobo sangaphandle okanye ...
I-Gnome Shell Screen Recorder, irekhoda yesikrini se-GNOME
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iGnome Shell Screen Recorder. Singarekhoda idesktop yethu ngaphandle kokufaka ezinye iinkqubo kwi-GNOME.
I-Saga iyonke yeMfazwe: Iitrone zaseBritannia ngumdlalo weqhinga elihle
I-Saga iyonke yeMfazwe: Iitrone zaseBritannia ngumdlalo omnandi ovela kwimpumelelo enkulu yeMfazwe iyonke ene-sagas ezininzi esele ifunyenwe ...
IFomiko, umhleli wokubhaliweyo owenziwe kumaxwebhu ePython
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga uFomiko. Le yinkqubo esebenzisa i-reStructuredText kunye nomhleli wokumakisha ukwenza amaxwebhu.
StarDict, yenza okanye ukhuphele kwisichazi-magama se-Ubuntu 18.04
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-StarDict. Le nkqubo iya kusivumela ukuba sibe nesichazi-magama sokuguqula amagama ngaphandle kwe-intanethi.
I-Zotero, umncedisi wokuqokelela izingqinisiso, idatha kunye nolwazi
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iZotero. Le nkqubo iyakusinceda ukuba siqokelele ulwazi kunye nezalathiso ukuze sihlale sinalo ulwazi esifuna ukudibana nalo.
Inkuthazo, ilawula kwaye yabelana ngokubhekisele kwibhayibhile
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kuQinisekiso. Le yinkqubo ye-Ubuntu esinokuthi sikwazi ukuyilawula kunye nokwabelana ngeereferensi zebhayiloji okanye iifayile zeFayile.
I-TrackMania Nations Ngonaphakade: Umdlalo weeMoto eziKhompyuter kwiMoto
I-TrackMania Nations Forever ngumdlalo weqonga wabadlali abaninzi kwi-intanethi ophuhliswe yinkampani yaseFrance iNadeo ikakhulu yePC, le yenye yeempawu ezininzi zeTrackMania ezakhiwe nguNadeo njengoko zininzi zazo.
I-OpenExpo iYurophu iqala eMadrid
I-OpenExpo iYurophu iqale eMadrid, esinye sezona ziganeko zinkulu zinxulumene neSoftware yasimahla eya kudibanisa amakhulu abasebenzisi kunye neenkampani ezinomdla kwiSoftware yasimahla ...
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga uxinzelelo lwe-XZ. Olu lucinezelo olulahlekileyo oluya kusigcinela indawo eninzi kwidatha yethu egcinwe okanye ehanjiswe kwinethiwekhi.
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-LAN Share. Ngalesi sicelo sinokwabelana ngeefayile ngaphandle komda wobungakanani phakathi kwe-Ubuntu kunye neWindows OS kwikhompyuter kwi-PC.
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-Iridium kunye nendlela yokuyifaka kwi-Ubuntu 18.04. Esi sikhangeli sikhulile sisebenzisa ikhowudi yeChromium njengesiseko. Uphuhliso lwayo lwenziwa ngemfihlo yabasebenzisi.
I-Cherrytree, uninzi lwe-Wiki-style-ukuthatha imisebenzi
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iCherryTree. Esi sisicelo sokuthatha amanqaku ngokungathi besenza iWiki. Konke oku kusuka kwinkqubo yethu Ubuntu.
I-Neovim, ifolokhwe efanelekileyo yeVim yamava omsebenzisi angcono
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kuNeovim. Le nkqubo yimfoloko ye-Vim yasentsomini esinokuthi siyenze ngokwezifiso ngaphandle kokuphulukana naliphi na igunya leVim.
Ukuphucula ukuvezwa kweefoto zakho ngeMacrofusion
I-Macrofusion ijolise ikakhulu kubafoti kwaye ivumela abasebenzisi ukuba badibanise iifoto eziqhelekileyo okanye ezikhulu zokuba nobunzulu bentsimi (i-DOF okanye ubunzulu bentsimi) okanye uluhlu olukhulu lwamandla (i-HDR okanye uluhlu oluphezulu lweDynamic).
Zenkit, cwangcisa ixesha lakho kwaye usebenze ukuze uvelise ngakumbi
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iZenkit. Le nkqubo iyakusivumela ukuba siququzelele ixesha lethu kunye nomsebenzi wethu wokufuna imveliso engaphezulu.
Uyibona njani i-asterisks ngelixa uchwetheza iphasiwedi kwisiphelo sendlela?
Xa usebenzisa i-terminal, usenokuba uqaphele ukuba xa umsebenzisi oqhelekileyo eqhuba isudo command ukufumana amalungelo awodwa, bayacelwa ukuba babe negama lokugqitha, kodwa umsebenzisi akafumani mpendulo ebonakalayo njengoko echwetheza iphasiwedi.
Uyikhuphela njani iaudiyo kwi-YouTube kwi-Ubuntu
Ukudityaniswa okuncinci kweenkqubo okanye ezinye iindlela ezikhoyo zokukhuphela iaudio kwi-YouTube kwi-Ubuntu kwaye ayinayo ividiyo kuphela kodwa ikwanazo neefayile zokumamela xa sihamba okanye siqhuba ...
I-HydraPaper, setha amaphephadonga ahlukeneyo kwiliso ngalinye
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iHydraPaper. Le nkqubo iya kusivumela ukuba sisete amaphephadonga ahlukeneyo xa sisebenzisa ngaphezulu kwesikrini esinye.
I-Eclipse Oxygen, khetha ukuba yeyiphi i-Eclipse IDE ofuna ukuyifaka
Kwinqaku elilandelayo siza kubona indlela yokufaka i-Eclipse Oxigen kwi-Ubuntu 18.04. Sebenzisa i-installers esiza kubakho kuyo, sinokufumana uninzi lweenkqubo ezenziwa yi-Eclipse kubaphuhlisi.
Indlela yokuvula iifayile kwi-Ubuntu
Isifundo esincinci sendlela yokucinezela kunye nokudibanisa iifayile ngendlela elula kwi-Ubuntu. Isikhokelo se-newbies esiza kunceda kulawulo olusisiseko lwezi ntlobo zeefayile, nangona unokwenza izinto ezininzi ezinje ...
Cointop, fumana ixabiso kunye neenkcukacha zamanani ee-idijithali zemali kwi-terminal
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga eCointop. Esi sicelo sesiphelo siza kusibonisa ixabiso kunye neenkcukacha manani kwii-cryptocurrensets.
Iphiko, indawo yokuphuhlisa eyilelwe iPython
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga uPhiko. Le IDE yenzelwe ukuba sikwazi ukuphucula iikhowudi zethu ePython. Konke oku kuvela kwi-Ubuntu 18.04.
Indlela yokuba nomzami wokulungisa iphupha ku-Ubuntu
Isifundo esincinci kwiReicast, i-emulator ye-dreamcast eya kusivumela ukuba sibuyele kwimidlalo yakudala ye-Dreamcast kwikhompyuter yethu noBuntu ...
IGrafana, isoftware evulekileyo yohlalutyo kunye nokubeka iliso
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iGrafana. Esi sisoftware sohlalutyo kunye nokubeka iliso kwimithamo emikhulu yedatha ngexesha lokwenyani.
Uyikhawulezisa njani iFirefox kwi-Ubuntu 18.04
Isikhokelo esincinci sokukhawulezisa iFirefox. Isikhokelo esiya kusivumela ukuba senze isikhangeli sethu sewebhu sisebenzise izixhobo ezimbalwa kwaye sihambe ngokukhawuleza ngaphandle kokutshintsha iikhompyuter okanye isantya se-Intanethi ...
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iJMeter. Le nkqubo iyakusinceda ekwenzeni uvavanyo lomthwalo kunye nokulinganisa ukusebenza kwezicelo ezahlukeneyo okanye iiseva.
Isikhokelo sokuba ujonge ntoni kwi-ultrabook ukuba sifuna ukuyithenga ukufaka okanye ukuba noBuntu. Isikhokelo esinomdla sokuthenga ngaphandle kwe-ultrabook ngaphandle kokusishiya umvuzo weenyanga ezininzi kwi-ultrabook ...
Inqaku elincinci malunga nabafundi be-pdf, yeyiphi i-pdf reader esinayo kwisidingo ngasinye kunye nendlela yokwazi olu hlobo lwenkqubo ukuyifaka kuhlobo oluncinci lobuntu ...
INetBeans 8.2, faka le IDE kwi-Ubuntu 18.04 yakho
Kwinqaku elilandelayo siza kubona ukuba singayifaka njani iNetbeans 8.2 IDE kwinkqubo yethu yokusebenza ye-Ubuntu 18.04.
UKakoune, umhleli wekhowudi olungileyo njengenye yeVim
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga eKakoune. Lo ngumhleli wekhowudi ophefumlelwe yiVi / Vim kwaye ufuna ukwenza lula ukusetyenziswa kwayo kunye nokwandisa unxibelelwano lwayo nomsebenzisi.
Ufumana, khuphela umxholo wemultimedia usebenzisa i-terminal
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kuYe-Get. Le nkqubo yesiphelo iya kusivumela ukuba sikhuphele umxholo wemultimedia kwininzi yamaphepha ewebhu athandwayo.
Ungawususa njani umyalezo wempazamo ongalindelekanga ku-Ubuntu 18.04
Isifundo esincinci okanye incam yokukhubaza umyalezo wempazamo ongalindelekanga ku-Ubuntu 18.04. Icebo elincinci eliza kuthintela iifestile ezicaphukisayo kunye nolwazi esele silwazi okanye asiludingi ...
AnyDesk 2.9.5, faka le software ekude kwi-Ubuntu 18.04
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga nayiphi na i-Anydek 2.9.5. Le nkqubo iya kuba luncedo kakhulu kuthi ukunxibelelana ukude kwenye idesktop okanye ukufumana inkxaso yezobuchwephesha kwikhompyuter yethu ekude.
Izandiso ezi-4 zeMozilla Firefox kwi-Ubuntu 18.04
Inqaku elincinci elinezongezo ezi-4 ezilungileyo zeMozilla Firefox esinokuzisebenzisa kunye neenguqulelo zamva nje zesikhangeli sewebhu ...
Inkqubo yefayile yeZFS, faka kwaye uyisebenzise kwi-Ubuntu 18.04 LTS
Kwinqaku elilandelayo siza kubona indlela yokufaka kunye nokusebenzisa inkqubo yefayile yeZFS. Ngale nkqubo yefayile siya kuba nakho ukufikelela ngokukhawuleza kwidatha esiyigcina kolu hlobo lokugcina i-RAID 0.
I-Malware ibonakala ngaphakathi kwivenkile ye-app ye-snap
Ivenkile yephakheji okanye ivenkile sele inayo i-malware yayo. Isicelo sivele ngeskripthi semigodi se-bitcoin esisebenza njenge-malware ye-Ubuntu ...
Umdyarho wothuli 2D, umdlalo wokubaleka imoto obhalwe kwiQt nakwiOpenGL
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga uthuli lomdyarho 2D. Lo mdlalo wokubaleka we-multiplatform 2D obhalwe kwi-QT kunye ne-OpenGL unokusetyenziswa kwi-Ubuntu ngaphandle kweengxaki.
Ungalutshintsha njani ulwimi ku-Ubuntu 18.04
Isifundo esincinci sendlela yokutshintsha ulwimi ku-Ubuntu 18.04, isifundo esincinci esiza kusivumela ukuba siguqule isicatshulwa senkqubo yethu yokusebenza siye kulo naluphi na ulwimi esilifunayo ...
I-FIM (i-Fbi iphuculwe), indlela yokujonga imifanekiso kwisiphelo sendlela
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-FIM. Esi sixhobo siza kusivumela ukuba sijonge imifanekiso evela kwisiphelo sendlela ngaphandle kokusebenzisa umboniso wayo.
Uyifaka kanjani imenyu yeklasikhi ku-Ubuntu 18.04
Isifundo esincinci sendlela yokuba nemenyu yakudala ku-Ubuntu 18.04. Umsebenzi olula kunye nokukhawulezisa ngokubulela kwisicelo seRetouching kunye nokongezwa kweGnome ebizwa ngokuba ...
I-ThePaPad, thatha amanqaku okanye amanqaku ngokufanelekileyo ku-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iThetapad. Esi sisicelo esinokuthi sithathe amanqaku okanye amanqaku ngokufanelekileyo kwinkqubo yethu Ubuntu okanye ngewebhu.
Ungasasaza njani kwiTwitch ukusuka kwisiphelo sendlela ku-Ubuntu nakwiziphumo?
I-Twitch liqonga elinikezela ngenkonzo yokusasaza ividiyo ephantsi kweAmazon, eli qonga libe lelinye lawona athandwa kakhulu ekwabelaneni ngokusasazwa komdlalo wevidiyo, kubandakanya ukuhanjiswa kweSports, kunye neminye iminyhadala enxulumene nemidlalo yevidiyo.
Uyifaka njani iArduino IDE kwiinguqulelo zamva nje zeBuntu
Isifundo esincinci sendlela yokufaka kunye nokumisela i-Arduino IDE kwiinguqulelo zamva nje ze-Ubuntu kunye nendlela yokuyisebenzisa ukwenza ezakho iiprojekthi zeHardware yasimahla ...
Ii-Orbital Apps, usetyenziso kunye nesimahla kwi-Ubuntu 18.04
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga ii-Orbital Apps. Iseti yezicelo eziphathwayo nezikhululekileyo zenkqubo yethu Ubuntu.
Inguqulelo elandelayo yoBuntu ayinakuba yiCanimal kodwa iya kubizwa ngokuba yiCosmic Cuttlefish
Inguqulelo elandelayo yoBuntu, Ubuntu 18.10, iya kubizwa ngokuba yiCosmic Cuttlefish, igama elahlukileyo kweli lihletywayo. Kodwa ayisiyiyo kuphela igama eliza kukumangalisa ngale nguqulo, ukongeza, Ubuntu 18.10 iya kuba ...
I-GSConnect, ukuphunyezwa kwe-KDE yokuDibanisa iGnome Shell 3.24+
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-GSConnect. Lulwandiso lweGnome Shell esinokuthi sidibanise ngayo isixhobo sethu se-Android nobuntu bethu, sisebenzisa i-KDE Qhagamshela njengenkxaso.
Uyenza njani into yokuphinda usebenzise umgqomo kwi-Ubuntu 18.04 desktop
Isifundo esincinci sendlela yokwenza iifayile ze-desktop kwi-Ubuntu 18.04 kunye nendlela yokubuyisela umgqomo kwidesktop ngokungathi yinkqubo yokusebenza yobunini ...
Uyifaka njani iprinta yakho ye-HP kwi-Ubuntu 18.04
Isifundo esincinci sendlela yokufaka kunye nokumisela nayiphi na iprinta ye-HP kwiinguqulelo zamva nje ze-Ubuntu. Indlela elula nekhawulezayo yokuba nomshicileli osebenza kwikhompyuter yethu noBuntu ...
Imifanekiso yokuqala yemihla ngemihla ye-Ubuntu 18.10 Cosmic Canimal ngoku iyafumaneka
Imifanekiso yokuqala yobuntu ye-Ubuntu 18.10 yeCosmic Canimal ngoku iyafumaneka, imifanekiso eya kufumana isoftware yenguqulo entsha, i-kernel entsha, inguqulelo yedesktop entsha, njl.
I-MySQL 8.0, ukufakwa okulula nokukhawulezayo kwi-Ubuntu 18.04
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-MySQL 8.0. Siza kubona indlela yokufaka ngokulula le nkqubo yolawulo lwedatha kwi-Ubuntu 18.04 yethu.
Ubuntu Mate 18.10 ayizukuxhasa i-32-bit yoyilo
Ubuntu MATE iya kuba yincasa yokuqala yokushiya uyilo lwe-32-bit. Oku kuyakwenzeka ngokukhutshwa kwe-Ubuntu MATE 18.10, ingxelo elandelayo ezinzileyo yoBuntu. Isigqibo senziwe ngenxa yesixhobo ...
Iruby, ufakelo kunye nophuhliso lomzekelo osisiseko ku-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kubona ukuba uyifaka njani iRuby kwi-Ubuntu 18.04. Olu lwimi lwenkqubo elula luya kuba sisiqalo esihle kuwo wonke umntu ofuna ukungena kwihlabathi lenkqubo.
IsandiSiguquli, guqula iifayile zomsindo kwiifomathi ezahlukeneyo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-SoundConverter. Ngale nkqubo siza kuba nakho ukutshintsha ifomathi yefayile yeaudiyo ngokuzoba nangokulula kwi-Ubuntu bethu.
ILubuntu 18.10 iya kuba ne-LXQT njenge-desktop emiselweyo
I-Lubuntu 18.10 iya kuba yinguqulelo yokuqala yokuba ne-LXQT njenge-desktop emiselweyo. Inguqulelo engazukutshintsha kuphela idesktop kodwa iya kususa ingxelo eyenziwe ngoku kutsha nje ngokuba yiLubuntu Next ...
Ubuntu 18.10 iya kuba yiCosmic
Nangona inkokeli yeprojekthi ingakhange ithethe, sele siyazi inxenye yesiteketiso se-Ubuntu 18.10, eya kuba yindalo, kodwa asilazi igama lesilwanyana ...
I-Google Chrome, iindlela ezimbini zokuyifaka kwi-Ubuntu 18.04 LTS
Kwinqaku elilandelayo siza kubona iindlela ezimbini zokufaka ugoogle chrome kwindawo yethu esandula ukufakwa Ubuntu 18.04 LTS. Siza kubona indlela yokuyifaka ngokucacileyo kunye nakwilayini yomyalelo.
Ubuntu 18.04 iza kwiNintendo Shintsha kunye neMicrosoft Surface 3
Inguqulelo yamva nje yoBuntu iza kwizixhobo zeHardware ezinjengeNintendo Siwtch kunye neMicrosoft Surface 3, izixhobo ezibini ezinokuba ne-Ubuntu 18.04 njengoko kubonisiwe ...
ILaverna, umhleli ovulekileyo womhleli weMarkdown wokuthatha amanqaku ethu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga eLaverna. Lo ngumhleli weMarkdown esinokuthi silawule kwaye sibambe amanqaku ethu naphina.
Izixhobo zekhompyutha, fumana ulwazi oluneenkcukacha kwisiphelo sendlela
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga indlela esinokufumana ngayo ulwazi malunga nekhompyuter yehardware kwisiphelo sendlela yokusebenza kwe-Ubuntu.
Siza kwabelana nawe ngezinye zezinto oza kuzenza emva kokufaka Ubuntu 18.04 LTS, ngakumbi kwabo bakhethe ufakelo oluncinci, oko kukuthi, bayifaka kuphela inkqubo ngemisebenzi esisiseko kunye nesikhangeli sewebhu seFirefox.
Kungenxa yokuba ixesha elide iLinux yayingenayo ikhathalogu efanelekileyo yemidlalo kwaye ndithetha ngayo kwiminyaka eli-10 eyadlulayo, apho ufuna ukonwabela isihloko esihle bekufuneka wenze ulungiselelo oluninzi lwangaphambili kwaye ulinde yonke into ukuba iqhubeke ngokugqibeleleyo ngaphandle nakuphi na ukubuyela umva.
Isikhokelo sokufakwa kunye nesokufakwa emva kokufakwa kuLubuntu 18.04, uguqulelo lwamva nje lwencasa ye-Ubuntu esemthethweni ephawuleka ngokulungela iikhompyuter ezinezixhobo ezimbalwa okanye iikhompyuter ezindala ...
Faka i-Open Broadcaster ngoncedo lwePlppak
Isoftware evulekileyo yoSasazo okanye eyaziwa ngokuba yi-OBS sisicelo esivulelekileyo nesivulekileyo sokurekhodwa nokuhanjiswa kwevidiyo kwi-intanethi.Ibhaliwe kwi-C nakwi-C ++, kwaye ivumela ukubanjwa kwemithombo yevidiyo ngexesha lokwenyani, ukwakheka kwendawo, ukukhowudisha, ukurekhoda kunye nokuhanjiswa kwakhona.
Ubuntu 18.04 LTS Isikhokelo sokufakwa kweBionic Beaver
Sabelana ngee-newbies isikhokelo sokufaka esilula sale nguqulo intsha yoBuntu kwikhompyuter yakho. Okokuqala, kufuneka sazi iimfuno ukuze sikwazi ukuqhuba Ubuntu 18.04 LTS kwikhompyuter yethu kwaye kufuneka ndikhankanye ukuba Ubuntu ilahlile inkxaso yeebhithi ezingama-32
Yintoni entsha ku-Ubuntu 18.04?
Siqokelela ezona ndaba ziphambili kunye notshintsho abasebenzisi abaya kuba nalo nge-Ubuntu 18.04 okanye eyaziwa ngokuba yi-Ubuntu Bionic Beaver, usasazo oluya kuba neNkxaso ende ...
Ukukhwaza Isele, yenza uphicotho lwe-SEO kwiphepha elikwidesktop
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiQula lokuKhwaza. Esi sixhobo siza kusivumela ukuba senze ukuloba kwe-SEO yamaphepha ewebhu kwi-Ubuntu desktop.
Indlela yokuhlaziya Ubuntu bakho kwi-Ubuntu 18.04
Isikhokelo esincinci sendlela yokuhlaziya Ubuntu bakho ku-Ubuntu 18.04, nokuba yeyiphi na inguqulelo esiyifakileyo kwikhompyuter yethu ...
ILibrem 5 Linux iya kuhambelana neFowuni yoBuntu
ILibrem 5 Linux, i-smartphone eyenzelwe iLinux iya kuba nohlobo olunefowuni Ubuntu okanye kunoko, inokuthengwa nge-Ubuntu Touch njengenkqubo yokusebenza hayi i-Android njengezixhobo ezininzi zangoku ...
Ukuloba kolwandle, bhala idatha yakho kwi-Ubuntu 18.04 desktop
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Seahorse. Le nkqubo iya kwenza kube lula ngathi ukubethela idatha kwikhompyuter yethu kwi-desktop ye-Ubuntu 18.04 yethu.
Usebenza njani iGksu ku-Ubuntu 18.04
Isixhobo seGksu sisuswe kwindawo yokugcina izinto zeDebian saza sakhutshwa kwii-Ubuntu 18.04 zokugcina, siyakuxelela ukuba yeyiphi enye indlela ekhoyo yokuba nesiphumo seGksu ku-Ubuntu 18.04 ...
I-EcryptFS, bhala ngokufihlakeleyo kwifolda yakho yomsebenzisi ku-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-EcryptFS. Esi sixhobo siza kusinceda ukubethela kwifolda yomsebenzisi ngendlela elula kwi-Ubuntu yethu.
Isifundo esincinci sendlela yokucoca i-hard drive yethu ukuze kubekho indawo yokuhlaziya ku-Ubuntu 18.04, uguqulelo olukhulu olulandelayo lwe-Ubuntu ...
I-FIGlet, yenza i-AscII yombhalo wesibhengezo kwisiphelo sendlela
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-FIGlet kunye ne-TOIlet. Ezi nkqubo ziya kusinceda ukuba senze i-ASCII yokubhaliweyo okubhaliweyo kwisiphelo sendlela yenkqubo yethu Ubuntu.
Susa iphasiwedi eyaziwayo kwifayile yePDF e-Ubutu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga indlela yokususa iphasiwedi eyaziwayo kwifayile ye-pdf. Siza kubona iindlela ezahlukeneyo. Ngelo xesha siza kubona inkonzo yewebhu ukuvula iifayile ze-pdf esingenayo iphasiwedi.
I-Trisquel 8 Flidas, inguqulelo entsha yosasazo olukhululekileyo olusekwe kubuntu phaya
Kutshanje kukhutshwe iTrisquel 8 Flidas, ingxelo entsha yosasazo esekwe ku-Ubuntu kodwa ehambelana neemfuno zeFree Software Foundation ...
I-GnuCash, inkqubo yezemali yobuqu ye-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iGnuCash 3.0. Le nguqulelo entsha yenkqubo yezemali yobuqu yethu.
I-OpenBoard, isixhobo esikhulu se-Ubuntu kunye neebhodi ezimhlophe zedijithali zokwazana
I-OpenBoard yisoftware esivumela ukuba sisebenzise iibhodi ezimhlophe zedijithali ku-Ubuntu ngendlela yasimahla nesimahla, into ethintelweyo ukuza kuthi ga ngoku kwiWindows nakwizisombululo zayo zobunini ...
How2, khangela ukugcwala okugcweleyo kwisiphelo sendlela
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-How2. Esi sixhobo siza kusivumela ukuba siqwalasele iStack overflow kwizindululo zezihloko. Konke oku ngaphandle kokushiya i-terminal yenkqubo yethu Ubuntu.
Yenza ubungakanani befonti yokubhaliweyo kobuntu bakho ngokulula ngeFonti yokuKhangela
Ukwenza ngokwezifiso iifonti yokubhaliweyo ku-Ubuntu yinto elula kakhulu kwaye kulula ukubulela kwisixhobo soFumana isiXhobo, isixhobo esisinceda kuyo nayiphi na ingxaki ngombhalo wefonti ...
I-Agedu, isixhobo sokulandela umkhondo wendawo yediski echithiweyo Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iAgedu. Le nkqubo iyakusinceda ukuba silandele indawo echithiweyo kwi-hard drive yethu eqhuba Ubuntu.
Indlela yokungenisa amanqaku encwadi kwiGoogle Chrome ukuya kwiMozilla Firefox kwi-Ubuntu
Isifundo esincinci sendlela yokungenisa amanqaku encwadi kwiGoogle Chrome okanye esinye isikhangeli kwiinguqulelo ezintsha zeMozilla Firefox efumaneka ku-Ubuntu ...
U-Elisa, umdlali womculo omtsha ovela kwiProjekthi ye KDE
U-Elisa ngumdlali omtsha womculo owazalelwa phantsi kwephrojekthi ye KDE kwaye iya kufumaneka kubuntu, KDE NEon kunye nabasebenzisi baka-Ubuntu, nangona izakubakhona kwezinye iidesika kunye neenkqubo zokusebenza ...
Umncedisi wemidiya, ezinye iindlela ezilungileyo zeBuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga ezinye iindlela zeseva yemithombo yeendaba Ubuntu. Ukongeza kwezi sele sizibonile kwibhlog, siza kubona ezinye ezinomdla esinokwabelana ngazo ngomxholo kwinethiwekhi yethu yasekhaya.
Ubuntu Studio iya "kuqalisa" ngo-Ubuntu 18.10
Kutshanje sifunde ukuba iqela e-Ubuntu Studio, enye yeencasa ze-Ubuntu ezisemthethweni, iceba "ukuqala kwakhona" incasa ...
Uxwebhu olutsha, yongeza olu khetho kwimenyu yokuma kwemouse
Kwinqaku elilandelayo siza kubona ukuba ulongeza njani ukhetho lweXwebhu elitsha kwimenyu yokuma kwimouse kwi-Ubuntu 18.04 kunye ne-17.10 ngokukhawuleza nangokulula.
Ndm, isicelo se-GUI somphathi wephakheji ye-NPM
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-ndm. Esi sisicelo se-GUI esinokuthi silawule ngokomfanekiso iiphakeji ezifakiweyo sisebenzisa umphathi wephakheji ye-NPM.
Ncedisa, yabelana ngeefayile ezimileyo kwinethiwekhi yakho yendawo ngokulula
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga ukuSebenza. Le iseva yefayile emileyo esinokuthi sabelane ngokulula ngayo kwiinethiwekhi zethu okanye kwindawo yethu yobulali.
I-GraphicsMagick, isixhobo sokulungisa umfanekiso wesiphelo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-GraphicsMagick. Le yi-CLI eya kuthi isivumele ukuba siguqule imifanekiso yethu ngeendlela ezininzi zokuyisebenzisa kamva, zonke ngaphandle kokushiya i-terminal.
I-Newsboat, i-RSS / Atom feed reader yesiphelo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiNewsboat. Lo ngumfundi we-rss / feed atom esinokuthi siqhubeke naye kunye neendaba ezisithandayo kwi-terminal.
I-Tcpdump, yazi ukugcwala konxibelelwano lwenethiwekhi ukusuka kwisiphelo sendlela
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-tcpdump. Esi sixhobo siza kusivumela ukuba sazi ukungenisa nokuphumayo kwetrafikhi yomnatha wonxibelelwano lwezixhobo zethu.
Ubhaliso loHlelo lwe-III lwaMabhaso aVulekileyo luya kuphela nge-11 ka-Epreli
Ushicilelo lwe-III lwaMabhaso aVulekileyo sele evulekile kude kube ngu-Epreli 11. Ukhuphiswano luqala iintsuku ezimbalwa zokulungiselela i-Open Expo Yurophu, esinye seziganeko ezibaluleke kakhulu ezinxulumene neSoftware yasimahla ...
ILubuntu elandelayo iya kusebenzisa iiCalamares njengesixhobo sokufaka incasa esisemthethweni
Abaphuhlisi bakaLubuntu baqinisekisile ukuba uLubuntu Okulandelayo, uhlobo olukhulu olulandelayo lukaLubuntu aluyi kuba ne-installer ye-Ubuntu kodwa iya kuba ne-Calamares njenge-instal graphical ye-flavour esemthethweni ye-Ubuntu ...
IGerbera, sakaza umxholo wemultimedia kwinethiwekhi yakho yasekhaya
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iGerbera. Le yiseva yemithombo yeendaba ye-UPnP esinokuthi sisasaze ngayo iifayile zemultimedia kwinethiwekhi yethu yasekhaya, zonke ngendlela elula kakhulu.
Byzanz, rekhoda umfanekiso weskrini ngomgca womyalelo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iByzanz. Le yinkqubo elula kwaye esebenza kakhulu eya kusenza sikwazi ukurekhoda ii-skrini ngeendlela ezahlukeneyo kwi-desktop yethu okanye kwi-Ubuntu terminal.
Uyifaka njani i-kernel 4.16 kwi-Ubuntu 17.10
Isifundo esincinci sendlela yokufaka ingxelo yokugqibela yeLinux kernel, iKernel 4.16, kuhlobo lwamva nje lwe-Ubuntu, Ubuntu 17.10 nakwiinguqulelo ze-Ubuntu LTS ...
I-Restic, isicelo sokwenza iikopi zokugcina ngokukhawuleza
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iRestic. Le nkqubo iya kusinceda ukuba senze iikopi zokulondolozwa kweefayile kwinkqubo yethu ngokukhawuleza, ngokulula nangempumelelo. Konke oku ukusuka kwisiphelo sendlela.
Iindawo zokugcina Ubuntu sele zinayo inguqulelo yamva nje yomqhubi we-Intel
Iqela le-Ubuntu sele likhuphe kwaye likhuphe uhlobo lwamva nje lomqhubi we-Intel kuwo onke amaqonga, eya kwenza onke amaqonga akhuseleke ngokuchasene neSpecter kunye neMeltdown ...
Teleconsole, yabelana ngeseshoni yesiphelo sakho kwangoko
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iTeleconsole. Esi sicelo siza kusinceda ukuba sabelane kwangoko ngeseshoni yethu yesiphelo kunye nabani na esimfunayo.
Inzondelelo, isikhangeli samaxwebhu sabaphuhlisi
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iNzondelelo. Esi sikhangeli sabaphuhlisi esiya kusivumela ukuba sikhuphele kwaye siqwalasele amaxwebhu ukuphendula nayiphi na imibuzo malunga neenkqubo zokufunda okanye isoftware ngqo kwikhompyuter yethu.
Uyifaka kanjani iSteam kwi-Ubuntu 17.10
Isikhokelo esincinci sokufaka i-Steam kwi-Ubuntu 17.10 kunye nezinye iinguqulelo zangoku ezinje nge-Ubuntu LTS. Sineenkcukacha zokufaka ngaphandle kokufaka yonke into okanye ubone ukuba imidlalo yethu yevidiyo ayisebenzi njani ...
Ezona ndlela zimfutshane zokukhetha ukusebenza neGnome
Isikhokelo esincinci sezindlela ezimfutshane zokuphatha iGnome ngaphandle kokusebenzisa imouse kwaye uyenze ngokukhawuleza kunakwimpuku okanye nakwisikrini sokuchukumisa ukuba sinelaptop enesikrini ...
Ungayikhubaza njani iphedi yokuchukumisa xa sisebenzisa imouse ku-Ubuntu 17.10
Isifundo esincinci sendlela yokucima iphedi yokuchukumisa yelaptop yethu xa sidibanisa imouse yemveli kwaye siphinda siqhagamshela xa imouse ingasasebenzi, into esebenzayo kubasebenzisi abasebenzisa Ubuntu kwilaptop ...
Igumbi leendaba, i-CLI yanamhlanje yokufunda iindaba zakho ozithandayo ku-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwigumbi leendaba. Le CLI iyakusinceda ukuba sihlale sinolwazi malunga neendaba zamva nje zomdla wethu kwisiphelo seBuntu.
Uyifaka njani iKanboard kwi-Ubuntu
Isifundo esincinci sendlela yokufaka kunye nokusebenzisa usetyenziso lwendlela yeKhanban ku-Ubuntu. Kule meko sikhethe isicelo seKanboard, isicelo esingafakwa simahla nakweyiphi na inguqulelo yoBuntu ...
I-Debfoster, coca inkqubo yakho kwaye ugcine kuphela iipakeji ezibalulekileyo
Kwinqaku elilandelayo siza kuqwalasela iDebfoster. Le nkqubo iyakusinceda ukugcina inkqubo yethu yoBuntu icocekile kwiiphakheji yeenkedama kunye nokuxhomekeka okungazalisekanga.
Iindlela ezi-5 kumthengi osemthethweni wase-Evernote woBuntu
Inqaku elincinci ngeendlela ezi-5 kumthengi osemthethweni wase-Evernote. Umthengi ochasayo ukufikelela ku-Ubuntu kwaye esinokuthi sithathe indawo yayo nayiphi na enye indlela ngaphandle kokushiya iqonga le-Evernote ...
Ubuntu bulungiselela ukususa amathala eencwadi eQt4 koovimba bayo
Ubuntu ujoyina uluhlu lonikezelo oluya kususa iilayibrari ze-Qt4 koovimba babo. Amathala eencwadi asebenzisa iinkqubo ezinjengePlasma kwaye ezingasasebenziyo ngenxa yohlaziyo olulandelayo ...
Cinezela kwaye ucofe iifayile usebenzisa i-gzip kunye ne-bzip2
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga indlela esingacinezela ngayo kunye nokudibanisa iifayile ukusuka kwisiphelo sendlela usebenzisa i-gzip kunye ne-bzip2 kwi-Ubuntu bethu.
Abafundi bePDF, iindlela ezahlukeneyo zenkqubo yethu Ubuntu 16.04
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga abafundi abahlukeneyo bePDF abaneempawu ezahlukeneyo zenkqubo yethu yokusebenza Ubuntu.
Laravel, faka esi sikhokelo se-PHP kwi-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga indlela yokufaka iLaravel kwi-Ubuntu. Esi sisakhelo sokuphuhlisa usetyenziso nge-PHP.
Umlawuli, umfundi we-ebook wabasebenzisi beKubuntu
Lector ngumfundi we-ebook odibana kakuhle ne-Kubuntu, iPlasma kunye neelayibrari ze-Qt kwaye ivumela ukuhlelwa kwemethadatha nangona ingenayo yonke imisebenzi yeCaliber ...
I-SH elula, iskripthi sokufaka usetyenziso olusisiseko ku-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Simple SH. Esi siskripthi se-bash esinokuthi sifake kuso izicelo ezisisiseko kwi-Ubuntu.
U-Yoda, umncedisi wakho kwilayini yomyalelo we-Gnu / Linux
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga uYoda. Lo ngumncedisi womntu kwilayini yomyalelo we-Gnu / Linux.
Uyiphucula njani i-Ubuntu 17.10 yakho kwi-Ubuntu 18.04 Beta
Isifundo esincinci sendlela yokuhlaziya Ubuntu 17.10, uguqulelo oluzinzileyo lwamva nje ku-Ubuntu 18.04 Beta, inguqulelo yophuhliso lwenguqulo yeNkxaso yeNde elandelayo uBuntu aya kuba nayo ...
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Kid3. Lo ngumhleli wethegi yomsindo osebenzayo kwi-Ubuntu yethu, esele ifikelele kuhlobo lwayo lwe-3.6.0.
Isifundo esincinci sendlela yokubeka umxholo odumileyo we-3 eSpanish. Isifundo esisebenzisekayo nesikhawulezayo senzelwe abasebenzisi abangakwaziyo ukuthetha ulwimi lweShakespearean ...
Kwinqaku elilandelayo siza kubona CopyQ. Le nkqubo iyakusivumela ukuba silawule iklibhodi yenkqubo yethu Ubuntu.
"Uqhelekile", ujongano olutsha lwe-Ubuntu MATE 18.04
Ubuntu MATE 18.04 nayo iya kuba neendaba ezimnandi. Enye yezi zinto zintsha zibizwa ngokuba ziqhelekileyo, ujongano olutsha oluya kwenza uMATE asebenze nangakumbi kwaye akhawuleze ...
Umhleli wePD PDF, isihleli somsebenzi esisebenzayo kunye neqonga lePDF
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Master PDF Editor. Le nkqubo iyakusivumela ukuba sihlele okanye senze iifayile zePDF ngokulula kwi-Ubuntu.
IFirefox Quantum, iqwalasela kwaye isebenzise isikhangeli sakho sewebhu
Kwinqaku elilandelayo siza kubona ukuba silungiselela njani kwaye sisebenzise njani isiKhangeli sewebhu seFirefox ukuze ube nenkonzo engcono.
Ukulungisa kunye nokuhlukanisa amacandelo amabi kwi-hard drive yakho ngezi zixhobo
Kuya kufuneka ndikhankanye ukuba ezi zixhobo zilandelayo ziya kufumana kuphela umonakalo kumacandelo ke, ukuba kukho nawuphi na umonakalo emzimbeni kwidiski okanye iingxaki ngeentloko, olu hlobo lomonakalo alusalungiswa ngokulula, ke kuyacetyiswa ukuba utshintshe nzima ukuqhuba.
Ezinye iindlela zokuya kwi-Skype. Olunye ukhetho olufanelekileyo lwe-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga ezinye iindlela ezilungileyo kwi-Skype. Zonke zinokusetyenziswa kwinkqubo yethu yokusebenza Ubuntu.
Izisombululo ku-Ubuntu zibamba ngokungalindelekanga.
Xa Ubuntu bumisa, inyathelo lokuqala esihlala sibhenela kulo kukuqalisa kwangoko ikhompyuter, nangona inokuba sesona sisombululo sisiso, ingxaki ilele xa inkqubo iqina rhoqo ihlala isenzeka, ikukhokelele kwimbono yokufaka inkqubo kwakhona okanye ukhetha ukutshintsha.
I-Terminus, isiphelo sendlela esinokwenzeka ngokusesikweni esinezixhobo ezininzi
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iTerminus. Le yiplatifomu yanamhlanje, enqamlezileyo kunye nesiphelo esinokusetyenziswa kwinkqubo yethu Ubuntu.
Abasebenzisi be-Kubuntu 17.10 sele benayo inguqulelo yePlasma
I-Kubuntu 17.10 sele inethuba lokuhlaziya idesktop yakho kuhlobo lwamva nje lwePlasma, into ekhawulezayo nelula ukubulela kwindawo yokugcina izinto ezingasemva ...
IG: dm, umxhasi we-desktop ukuthumela imiyalezo ngqo kwi-Instagram
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-IG: dm. Lo ngumthengi oya kusivumela ukuba sithumele imiyalezo ngqo kwinethiwekhi ye-Instagram.
Isisombululo: Ubuntu ngaphandle kwe-wired okanye i-wifi ye-intanethi
Ukuba, xa usenza ufakelo olutsha lwe-Ubuntu okanye uhlaziya kwinguqulelo entsha, uzifumana unengxaki yokungabinayo i-intanethi, unganakho ukusombulula ingxaki yakho ngesinye sezisombululo endabelana nawe ngaso Oku kubhaliwe.
Uyifumana njani iGoogle Drayivu ku-Ubuntu 17.10
Isifundo esincinci sokufikelela kwidesktop ka-Ubuntu 17.10 ukuya kwinkqubo yokugcina ilifu kaGoogle, kuGoogle Drayivu. Inkonzo ehlala ichasene nabasebenzisi beLinux kwaye ngakumbi abasebenzisi be-Ubuntu ...
I-algorithm yokuqonda ye-Facebook ivumela ukukhawulezisa ukufakwa kwe-Ubuntu 10 nge-18.04%
Inguqulelo elandelayo ye-Ubuntu LTS iza kusebenzisa i-Facebook compression algorithm, eya kwenza inkqubo yokufaka ikhawuleze kunesiqhelo nakwiinguqulelo ezizayo iinkqubo ziya kufaka ngokukhawuleza ...
I-WebP, ifomathi yemifanekiso yamaphepha ewebhu kaGoogle
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga ukuba siza kukwazi njani ukutshintsha ifomathi yemifanekiso yethu kwifomathi kaGoogle ebizwa ngokuba yiWebp. Konke oku kulula kwaye ngokukhawuleza.
Ubuntu Budgie uqhubeka nokuphucula ukukhutshwa kwe-Ubuntu LTS elandelayo
Ukubheja kweencasa ezisemthethweni ngoku kuyafumaneka kwaye oko kusenza sazi izinto ezintsha ezinje ngeBuntu Budgie, incasa esemthethweni esemncinci eqhubeka nokukhula kunye nokuphucula ngohlobo ngalunye ...
I-Cryptmount, yenza iifayile ze-encrypted kwi-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Cryptmount. Esi sisixhobo esinokuthi senze iifayile ze-encrypted kwi-Ubuntu.
I-keybase, insiza yengxoxo ebhaliweyo ye-geeks
Kule nqaku siza kujonga kwi-Keybase. Sisicelo se-encrypted chat esinokuthi sinxibelelane nabantu kwihlabathi liphela ngaphandle kokwazi i-imeyile okanye inombolo yefowuni kuthungelwano lwentlalo.
I-FreeTube, isidlali sedesktop esivulekileyo seYouTube
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iFreeTube. Le nkqubo iyakusivumela ukuba sibukele iividiyo zikaYouTube ngaphandle kwentengiso, sizikhuphele, sibhalisele amajelo ngaphandle kweakhawunti kaGoogle kunye nezinye iindlela onokukhetha kuzo.
Ukuba ngaphezulu, jonga ukusetyenziswa kwebhanwidth yenethiwekhi yakho ngexesha lokwenyani
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-iftop. Le nkqubo iyakusivumela ukuba sibeke iliso kumda wokuhambahamba konxibelelwano lwethu kwaye siyazi ukuba yintoni ekuyo.
Uyenza njani ipassword eyomeleleyo kwaye uyijonge kwisiphelo sendlela
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga indlela yokwenza iiphasiwedi ezinamandla kwaye sijonge ngokulula ngokusebenzisa imiyalelo kwi-Ubuntu yethu.
Fumana idilesi yakho ye-IP yasesidlangalaleni okanye yabucala kwiGnu / Linux
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga indlela esinokufumana ngayo idilesi ye-IP yoluntu kunye neyabucala ngeendlela ezahlukeneyo kwinkqubo yakho ye-Gnu / Linux.
I-ElasticSearch, faka le seva yokukhangela ku-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-ElasticSearch. Le iseva yokukhangela isicatshulwa esigcweleyo seJava esinokuthi siyisebenzise ku-Ubuntu bethu.
Amanqaku e-Cloud Sticky, isicelo simahla seJava samanqaku anciphayo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Cloud Sticky Notes. Esi sisicelo seJava esinezixhobo ezininzi esinokuthi senze ngazo amanqaku enziwe ngokwezifiso, esinokuwagcina kwilifu nakwezinye izixhobo.
Ngoku iyafumaneka Ubuntu 16.04.4, uhlaziyo olutsha lwe-Ubuntu LTS
Uhlaziyo olutsha lwe-Ubuntu LTS kunye nokukhululwa kwezokhuseleko, Ubuntu 16.04.4 ngoku iyafumaneka kubo bonke abasebenzisi baka-Ubuntu; Inguqulelo elungisa iibugs zokhuseleko ezivele kutshanje ...
Phucula umqondiso wenethiwekhi yakho ngaphandle kwamacingo ngezi ngcebiso zilandelayo
Imiba eliqela inokubangelwa zezi ntlobo zeengxaki, phakathi kwezona zixhaphakileyo ngumgama phakathi kwezixhobo zakho kunye ne-router, kunye nokungathatheli ngqalelo iindonga, enye kukuba ayizizo zonke eziqwalasele amandla e-wifi yazo card kuba ayifani.
I-Dropbox, bamba kwaye wabelane ngeefayile zakho mahala
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iindlela ezimbini ezilula zokufaka iDropbox kwi-Ubuntu. Enye yazo iya kuba ngumzobo kwaye enye isuke kwisiphelo se-Ubuntu.
I-RetroArch i-emulators yomdlalo wonke inye
Sifundisa indlela yokufaka kunye nokumisela iRetroArch kwinkqubo yakho yoBuntu kunye neziphumo. Ngale nkqubo intle uya kuba nakho ukonwabela iintlobo ezahlukeneyo zemidlalo yokulinganisa ngaphakathi kwinkqubo enye, oya kuthi ngayo ukwazi ukwenza ilayibrari enkulu yemidlalo endaweni enye.
Umhleli weKomodo, faka lo mhleli wekhowudi yasimahla ku-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga umhleli wekhowudi yasimahla yeKomodo. Apha siza kubona indlela yokufaka iinguqulelo ezili-10 no-11 zale nkqubo ku-Ubuntu.
Isikhokelo esincinci esinezixhobo ezi-3 ezikwi-Ubuntu yemisebenzi yemihla ngemihla yomfoti. Izixhobo zasimahla, zasimahla kwaye ziyahambelana nakuphi na ukusasazwa kwe-Gnu / Linux, hayi i-Ubuntu kuphela ...
Uyenza njani Ubuntu ukuba imiswe xa sivale isiciko selaptop
Isifundo esincinci sendlela yokwenza Ubuntu ukuba iye kwimowudi yokulala xa sivala isiciko selaptop kwaye isikrini asicimi nje. Into eza kusivumela ukuba songe amandla kunye nebhetri, kubalulekile kwizixhobo eziphathwayo ...
ITraverso DAW, isoftware yokurekhoda kunye nokuhlela isoftware ku-Ubuntu 16.04
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Traverso DAW. Le software elula kwaye esinokurekhoda kuyo okanye sihlele iingoma zethu zomsindo kunye nerekhodi ezihlanganisiweyo ezihambelanayo, zonke zisuka kwi-Ubuntu.
Yongeza iinombolo zomgca kwimveliso esemgangathweni yeefayile zombhalo kwisiphelo sendlela
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iindlela ezintandathu zokuba sinokongeza njani amanani emigca kwimveliso esemgangathweni yeefayile zombhalo esinokuthi sizisebenzise kwisiphelo sendlela.
I -officeoffice yemithombo evulekileyo yokuvula indawo yeofisi
I-Onlyoffice yindawo yasimahla, evulelekileyo yeofisi phantsi kweGNU AGPLv3 kunye nelayisensi yeplatform eninzi, ephuhliswe yi-Ascensio System SIA. Le yenye yeLibreOffice, iOfisi 365 kunye noGoogle amaXwebhu, i-Onlyoffice ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zenkonzo ezijolise kuzo zonke iimfuno.
Ubuntu bulungisa umba wekernel ngeSpecter Variant 2 kulwakhiwo oludumileyo
Uhlaziyo kwi-Ubuntu kernel lukhutshwe kule veki, uhlaziyo olujongana ne-Specter Variant 2 sesichengeni kuwo onke ama-non-64-bit ...
I-FreeOffice 2016, enye indlela efanelekileyo kwiOfisi yeMicrosoft
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iFreeOffice 2016. Eli suite yeofisi ejolise ekubeni yenye indlela yasimahla kwiOfisi yeMicrosoft.
I-Canonical ikwaxhasa i-UBPorts
I-Canonical kutsha nje inikezele ngee-smartphones nge-Ubuntu Ifowuni kwiprojekthi ye-UBports, kunye nale projekthi ikhuphe inguqulelo ye-Unity 8 kunye nohlobo lweFowuni yoBuntu ye-Moto G 2014 edumileyo ...
5 abaphathi bokungena kunye nendlela yokutshintsha oyisebenzisayo
Umphathi Wokubonisa okanye ngeSpanish eyaziwa njengomphathi wokungena ngemvume, ujongano olubonakalayo ekupheleni kwenkqubo yokuqalisa, endaweni yegobolondo emiselweyo. Kukho iindidi zabaphathi apho sinokufumana kwezona zilula ...
I-OpenVAS, faka esi skena sokubeka emngciphekweni kwi-Ubuntu 16.04
Kwinqaku elilandelayo siza kubona ukuba uyifaka njani i-OpenVAS kwi-Ubuntu 16.04. Esi sikhokelo senkonzo siskena esinamandla sokuchaphazeleka kwiwebhu okanye iikhompyuter zasekhaya.
Aspell, lawula upelo lwamaxwebhu akho kwisiphelo sendlela
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-Aspell. Le nkqubo iyakusivumela ukuba silawule upelo lwamaxwebhu ethu kwisiphelo sendlela.
I-Riot im, incoko ebhalwe ngokufihlakeleyo kunye nokusasazwa ngokusemthethweni okanye ukusebenzisana
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiRiot im. Olu ngumthengi wengxoxo elula kwaye oya kuthi asivumele ukuba sithethe ngokufihliweyo kunye nokusasaza iingxoxo kunye nokusebenzisana kwiwebhu okanye kwidesktop yethu Ubuntu.
I-Linuxbrew, ifolokhwe yomphathi wepakeji yasekhaya
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iLinuxbrew. Lo ngumphathi wephakheji efana neKhaya kwiinkqubo zethu zeGnu / Linux.
Ngoku ubumbano lwe-7.4.5, uhlaziyo olukhulu lokugqibela kule desktop?
Ubuntu ikhuphe ingxelo entsha yoBumbano, Ubunye 7.4.5. Inguqulelo entsha, ebaluleke kakhulu kodwa engatshintshi idesktop njengobunye 8 okanye ubunye 7.5 obunokwenza.
I-Cmus, isidlali somculo sekhonsoli, encinci, ekhawulezayo kunye namandla
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiCmus. Le nkqubo ngumdlali wekhonsoli yoBuntu bethu, encinci, ekhawulezayo kwaye enamandla.
Ubuntu buya kurekhoda idatha kwikhompyuter yakho nangona kungenanjongo zimbi
Ubuntu buya kuba nomsebenzi omtsha oza kurekhoda idatha kwikhompyuter yethu ukuphucula iinguqulelo ze-Ubuntu kunye nokusebenza kwayo ...
Ubuntu 18.04 iya kuba nenketho encinci yokufaka
Ubuntu 18.04 iya kuba nenketho entsha eya kubandakanya ufakelo oluncinci lwe-Ubuntu kwi-Ubiquity installer. Inketho eya kunceda ngaphezu komsebenzisi omnye wengcali kwaye iya kuphelisa ngaphezu kweepakethe ezingama-80 eziqhelekileyo zifakwe kwi-Ubuntu ...
I-TuxGuitar 1.5, faka lo mhleli wamanqaku ku-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kubona indlela yokufaka iTuxGuitar 1.5. Le nkqubo ngumhleli wamanqaku esinokuthi sifunde ukudlala ikatala okanye esinye isixhobo ngokukhululekileyo.
Ubuntu MATE 18.04 izakuvumela ukwanda kweethayile kwidesktop yethu
Umsebenzi weethayile kaMATE uza kuphuculwa, uvumele ukusetyenziswa kweefestile ezine ezahlukeneyo kwaye kunokwenzeka ukuba ukwenze ku-Ubuntu MATE 18.04 LTS ...
MultiTail, funda iifayile ze-log ezininzi ngaxeshanye ukusuka kwisiphelo sendlela
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-MultiTail. Ngale nkqubo singafunda iifayile zobhaliso ezininzi zenkqubo yethu ngaxeshanye ukusuka kwisiphelo sendlela.
Iyamangalisa, umhleli we-Markdown osindayo kunye nobutyebi
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga ngokumangalisayo. Lo ngumhleli okhanyayo kunye nobutyebi ocebileyo we-Markdown esinokuyifaka ngokulula kwi-Ubuntu.
I-Nautilus Image Converter, yenza ubungakanani kwakhona kwimifanekiso ku-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iNautilus Image Converter. Le yiplagi yeNautilus esinokuthi siyenze kwakhona okanye siyijikeleze imifanekiso sisebenzisa imenyu yokunqakraza imouse ekunene.
Olona qeqesho luhle okokoko, yenza ukubamba kwakhona okutsala amehlo kumgca wokuyalela
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kweyona Resume iQhelekileyo. Ngale sicelo somgca wokuyalela siya kuba nakho ukwenza ukubamba kwakhona okutsala amehlo ngaphandle kwexesha.
I-Sophos, faka le antivirus yesiphelo kwi-Ubuntu yakho
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iSophos. Singayifaka le antivirus yasimahla yesiphelo sendlela ngendlela elula kwi-Ubuntu yethu.
I-CodeLobster, uyifaka njani le IDE ye-PHP kwi-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-CodeLobster IDE. Singayifaka le IDE ku-Ubuntu sisebenzisa iphakheji yayo .deb kwaye ngayo sinokukhulisa iikhowudi zethu ngeelwimi ezahlukeneyo, nangona ijolise kwi-PHP.
I-Zsync, isixhobo sokukhuphela kuphela iinxalenye ezintsha zefayile
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iZsync. Ngezi zixhobo sinokukhuphela iinxalenye ezintsha ze-ISO, ngaphandle kokukhuphela i-ISO yonke xa kuvela uhlobo olutsha.
Phinda kabini, fakela le software yasimahla yogcino ku-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Duplicati backup. Esi sisixhobo esiza kusivumela ukuba senze iikopi ezifihliweyo zeefayile zethu kwaye sizigcine kwiiseva zewebhu, zonke zisimahla.
Dia, faka lo mhleli weentlobo ezahlukeneyo zemizobo ku-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-dia. Esi sisixhobo somzobo esisebenziseka ngokulula sobuntu bethu.
Yiba yingcali ye-pdf kwisiphelo se-Ubuntu
Isikhokelo esincinci sokusebenza ngeefayile ze-pdf kwisiphelo sendlela. Isikhokelo esilula, esikhawulezayo nesiluncedo sibulela isixhobo se-pdfgrep, isixhobo esiya kusinceda sisebenze kwisiphelo sendlela ngezi fayile zisetyenziswa ngokubanzi kwaye zithandwa ...
I-Bmon, ukulungisa ingxaki kwinethiwekhi kunye nesixhobo sokubeka iliso
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga ibmon. Esi sixhobo sesiphelo siza kusinceda ukulawula ukugcwala kwenethiwekhi kwaye ke kuthintele ukulahleka kwebhendi ngokutolika idatha esisinika yona.
I-TeXstudio, indawo yokubhala yokudala amaxwebhu e-LaTeX
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-TeXstudio. Le nkqubo, esekwe kwi-Texmaker, iya kusinceda senze amaxwebhu e-LaTex ngendlela ekhululekile kwi-Ubuntu yethu.
I-Skype 8.14.0.10, faka le nguqulo ku-Ubuntu usebenzisa iphakheji ye-Snap
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga ukuba singayifaka njani i-Skype version 8.14.0.10 sisebenzisa ipakethe ye-snap ku-Ubuntu nokuba kukhetho lwesoftware okanye usebenzisa i-terminal.
Hamba, fakela olu lwimi lwenkqubo kwi-Ubuntu 17.10
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga ukuba singalufaka njani ulwimi lwenkqubo kaGoogle Go ku-Ubuntu 17.10. Siza kubona kwakhona indlela yokwenza inkqubo encinci yesitayile "Molo wehlabathi" ngayo.
Imin, encinci, ekhawulezayo kunye nesixhobo esisezantsi sewebhu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwisikhangeli sewebhu seMin.Le sisikhangeli esincinci, esikhawulezayo esidinga izixhobo ezimbalwa ukunika ukusebenza okuhle kwinkqubo yethu yoBuntu.
Htop, uyifaka njani kwaye ulawule iinkqubo kwi-Ubuntu 17.10
Kwinqaku elilandelayo siza kubona indlela yokufaka i-htop ku-Ubuntu 17.10 esinokuthi ngayo silawule iinkqubo zeqela lethu ngokulula kwisiphelo.
Indlela yokwenza Ubuntu bakho ngokwezifiso: iindlela ezi-5 zokufumana imixholo, ii icon kunye neeplagi zedesktop yakho
Inqaku elincinci malunga neendawo esinokuthi sizisebenzise ukwenza Ubuntu ngokwezifiso kwaye apho siza kufumana khona ii-icon, imixholo yedesktop kunye nezinye izinto ukwenza Ubuntu bethu ...
I-Bashrc, lungisa i-Bash ngokukhawuleza kwindlela othanda ngayo ngendlela elula
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga indlela esingayitshintsha ngayo i-bash ngokukhawuleza ukuthanda kwakho ngendlela elula nekhawulezayo ngokumisela i-bashrc.
I-QstopMotion 2.4.0, .deb iphakheji yokudala iiopopayi zokumisa
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-qStopmotion. Esi sisixhobo esinokuthi sisebenzise imifanekiso emileyo kwaye sithumele iziphumo njengevidiyo kwiifomathi ezaziwayo.
Ungalifumana njani ilifu labucala nge-Ubuntu Server kunye ne-Nextcloud
Isikhokelo esincinci sokufaka kunye nokumisela i-Nextcloud kwikhaya okanye kwiserver yakho simahla kwaye esivumela ukuba sibe nelifu labucala ngaphandle kokwabelana ngedatha yethu noGoogle ...
I-Flameshot, isixhobo sokuthatha iifoto-skrini
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiFlameshot. Esi sixhobo sasimahla siya kusivumela ukuba sithathe ngokulula izikrini kwi-Ubuntu bethu.
Ungazisusa njani 'ii-kernels' ezimbi kwi-Ubuntu 17.10
Isifundo esincinci sendlela yokucoceka kwe-Ubuntu 17.10 yethu endala kunye ne "bad" yeenkozo ezisasazwayo esinokuba yingxaki enkulu kumsebenzisi ...
Uyifaka njani iMozilla Firefox 58 kwi-Ubuntu 17.10
Isifundo esincinci sendlela yokufaka ingxelo entsha yeMozilla Firefox, iMozilla Firefox 58 kwi-Ubuntu 17.10 ide ifike ngokusesikweni kwiindawo zokugcina ezisemthethweni ze-Ubuntu ...
Yenza iincwadi zasimahla ku-Ubuntu enkosi kuSigil
Inqaku elincinci malunga nokuba zeziphi iinkqubo ezikhoyo zokudala ii-ebook zasimahla ku-Ubuntu. Kuyo sithetha ngeCaliber kunye neSigil, umhleli omangalisayo osinceda ukuba senze naluphi na uhlobo lwe-ebook ku-Ubuntu ngaphandle kokuhlawula nantoni na ...
Iindlela ezi-5 zasimahla kwi-OneNote Ubuntu
Isikhokelo esincinci esinezinye iindlela ezikhoyo ze-OneNote ukuba sithatha isigqibo sokutshintsha iWindows yeWindows kwaye siyenze eyona nkqubo yethu iphambili yokusebenza ...
Ubeka njani ii icon kwi-Elementary OS desktop
isifundo esincinci sendlela yokubeka ii icon kwi-desktop ye-Elementary OS, ulwabiwo olusekwe ku-Ubuntu kodwa ngenkangeleko yeMacOS yomsebenzisi wokugqibela ...
CPULimit, umda ekusebenzeni okwenziwa yinkqubo ye-CPU
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-CPULimit. Esi sixhobo siza kusivumela ukuba sinciphise ukusetyenziswa kwe-CPU yinkqubo kwinkqubo yethu yokusebenza.
IGnome To Do iyeza ku-Ubuntu 18.04
Iqela le-Ubuntu ligqibe kwelokuba lifake usetyenziso lokuvelisa kuhlobo olulandelayo lwe-Ubuntu, iya kuba yiGnome To Do, isicelo sokwenza uluhlu lwezinto eziza kwenziwa ...
Ubuntu 16.04.4 ilibazisekile yi-Meltdown kunye neSpecter
Uhlaziyo olulandelayo olukhulu lwe-Ubuntu LTS, Ubuntu 16.04.4 izakufika kade njengoko uMeltdown kunye nohlaziyo lwezokhuseleko lweSpecial lungagqibi ukusebenza ngokufanelekileyo ...
I-Drop_caches, coca imemori ye-RAM kwindlela yakho ukusuka kwisiphelo sendlela
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga indlela esinokuyicoca ngayo imemori ye-RAM ye-Ubuntu yethu kwisiphelo sendlela sisebenzisa i-drop_caches kunye nendlela yokwenza esi senzo ngokwenza umsebenzi wekron.
Ungayitshintsha njani iGnome uye kubumbano ku-Ubuntu
Isikhokelo esincinci sendlela yokutshintsha iGnome yomanyano ngaphakathi ku-Ubuntu. Isifundo esilula nesikhawulezayo esiya kusivumela ukuba sibumbane njenge-desktop emiselweyo.
Ubuntu 18.04 izakuzisa ngokungagqibekanga X.Org
Iseva emiselweyo engagqibekanga ku-Ubuntu 18.04 ayizukuba yiWayland njengaku-Ubuntu 17.10 kodwa iya kuba yiX.org, iseva endala ye-Ubuntu yemizobo kunye nenketho ezinzileyo nekhuselekileyo kwabaninzi ...
Guqula ingcambu okanye iphasiwedi yomsebenzisi ku-Ubuntu 17.10 ngokulula
Kwinqaku elilandelayo siza kubona iinketho ezimbalwa zokutshintsha ingcambu okanye iphasiwedi yomsebenzisi ku-Ubuntu ngokulula nangokukhawuleza.
Uyifumana njani iTwitch kwi-Ubuntu 17.10
Sikuxelela indlela yokufaka iGnome Twitch, umxhasi weTwitch ongekho semthethweni osebenza ku-Ubuntu 17.10 kunye no-Ubuntu Gnome kwaye esebenza ngokupheleleyo ngenkonzo yokusasaza ...
I-Notelab, isicelo seJava sokuthatha amanqaku edijithali
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iNotelab. Esi sisicelo seJava esinokuthi sithathe amanqaku edijithali sisebenzisa isylus okanye imouse yethu.
Uyilungisa njani imiba phakathi kweVirtualBox kunye ne-Ubuntu 17.10
Iimpawu zokhuseleko zeMeltdown kunye neSpecter zibangela ukonakala kwesibini, enye yazo kukukhubazeka kweVirtualbox kwi-Ubuntu 17.10, sikuxelela ukuba ungayilungisa njani ...
I-Drawpile, inkqubo yokuzoba inethiwekhi Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iDrawpile. Le yinkqubo yokuzoba simahla yokwenza iiprojekthi zokusebenzisana kwinkqubo yethu Ubuntu.
I-Wikipedia2text, jonga amanqaku e-Wikipedia asuka kwisiphelo sendlela
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Wikipedia2text. Ngale script sinokujonga amanqaku e-Wikipedia kwisiphelo sethu, okoko nje sinesikhangeli esibhaliweyo esifakelweyo.
Uhlaziya njani i-Nautilus version ye-Ubuntu 17.10
Isifundo esincinci sendlela yokuhlaziya Ubuntu ukuze ube nohlobo lwamva nje lweNautilus kuhlobo lwamva nje lweBuntu ngaphandle kokulinda uhlaziyo okanye izigqibo kwikamva lokuphucula Ubuntu.
IVundle, lawula iiplagi kwiVim ngokufanelekileyo
Kwinqaku elilandelayo siza kuqwalasela uVundle. Lo ngumphathi weplagi yomhleli weVim, oya kuthi usivumele ukuba silawule ngokufanelekileyo iiplagi zalo mhleli.
Ubunye 8 sele buqhuba usetyenziso lwesiko ngenxa ye-UBPorts
Ubunye 8 yidesktop engayi kuza ku-Ubuntu ngokungagqibekanga kodwa eqhubeka nokuqhubela phambili kuphuhliso lwayo. Enkosi kwii-UBPorts, Ubunye 8 sele buqhuba usetyenziso lwesiko ngokuchanekileyo kunye nohlaziyo lweXMir ...
ImephuSCII, imephu yehlabathi eneenkcukacha zesiphelo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iMephuSCII. Ndive nje ngale app ngengozi ...
Slack, snap upake le ngxoxo kunye nentsebenziswano
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iSlack. Le yingxoxo kunye nesicelo sokusebenzisana esinokufaka ku-Ubuntu sisebenzisa iphakheji ye-Snap kunye nephakheji ye-.
I-PyRadio, umdlali werediyo snap iphakheji yesiphelo se-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iPyradio. Le nkqubo ngumdlali kanomathotholo osekwe kwiPython oza kusetyenziswa kwisiphelo seBuntu.
I-Eclipse Che, i-IDE yesiGaba esilandelayo kunye nendawo yokusebenzela kwilifu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-Eclipse Che. Esi sisizukulwana esitsha esijolise ekusebenzeni kwilifu eliza kusinika indawo efanelekileyo yokusebenza. Isimahla kwaye ingumthombo ovulekileyo.
I-Justmd, umhleli wombhalo osindayo wokuthumela ngaphandle kwi-HTML kunye nePDF
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iJustmd. Lo ngumhleli we-multiplatform ongenasiphelo oya kusivumela ukuba sithumele amanqaku ethu kwi-html kunye ne-pdf ngokulula.
I-KXStitch 2.1.0, yenza okanye uhlele iipatheni ezinqamlezileyo zobuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-KXStitch 2.1.0. Le nkqubo iya kuba luncedo kakhulu ekwenzeni okanye ukuhlela iipatheni zokunqamla umnqamlezo kwi-KDE yayo nayiphi na inguqulelo Ubuntu.
Wget, eminye imizekelo yento enokwenziwa ngesi sixhobo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Wget. Le dowloader idumileyo yesiphelo sethu iya kusivumela ukuba senze naluphi na uhlobo lokukhuphela kwi-Ubuntu yethu ngokufanelekileyo.
I-Partclone, isoftware yasimahla yokwenza ukwahlula kunye nemifanekiso
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iPartclone. Isoftware yasimahla yokwenza imifanekiso kunye nokubuyisela imifanekiso okanye izahlulelo ku-Ubuntu bethu.
Wazi njani ukuba Ubuntu bethu busemngciphekweni wokunyibilika kunye nokujonga
Isifundo esincinci sendlela yokwazi ukuba i-Ubuntu 17.10 yethu ichaphazelekile yiSpecter kunye / okanye iMeltdown, ezimbini ezinobunzima ezichaphazela iprosesa ...
Quad9 DNS, qwalasela le nkonzo kwi-Ubuntu 16.04 kunye no-Ubuntu 17.10
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga inkonzo ye-Quad9 ye-DNS. Siza kubona indlela yokuqwalasela le nkonzo ekhuselekileyo ye-DNS kwi-Ubuntu 16.04 kunye no-Ubuntu 17.10.
I-Subsonic, iseva yemithombo yeendaba esekwe kwi-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Subsonic. Le iseva yemithombo yeendaba esekwe mahala ebhalwe kwiJava Ubuntu.